Tirtir macluumaadka si nabdoon adiga oo tirtiraya | Laga soo bilaabo Linux
Tirtir macluumaadka si nabdoon adiga oo tirtiraya
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Lagu taliyay, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Kuwa aniga oo kale ah oo khayaali ah oo doonaya inay ka saaraan macluumaadka nidaamkooda hab aan dib loo soo celin karin (ama ku dhowaad), halkan waa xalka.
Aynu rakibno xirmada: aamin-tirtir
Markaa waxay ku filnaan doontaa in la isticmaalo amarka srm waana tirtiri doontaa galka ama feylka aan si nabadgelyo ah u dooneyno.
Sidee tani u shaqaysaa?
Fudud Markii aan wax ka tirtirno nidaamkayaga, run ahaantii macluumaadkaas lama tirtirin, laakiin HDD-da waxaa "lagu tilmaamay" in qeybaha ku jira xogtaan ay yihiin 'faaruq', ka dibna markaan nuqul ka sameyno wax cusub oo ku saabsan HDD-keena waqtiga, in yar Wax yar ayaa laga tirtiraa macluumaadka haaya qaybahaas hore loo tilmaamay ama la calaamadeeyay.
Hagaag, waxa srm sameeyaa waa tirtirtaa macluumaadkaas sidaan caadiyan u qabanay, laakiin kaliya maahan tan, laakiin waxay qortaa oo tirtirtaa dhowr jeer isla goobtii macluumaadka la tirtiray ay qabsadeen, taas oo ah, way tirtirtaa oo qortaa, tirtirtaa oo qortaa, sidan waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheynIlaa ay haystaan ​​qalab gaar ah sida CIA, FBI, NSA, iwm haha) ku guuleysto inaad ka soo kabato macluumaadka la tirtiray.
Tusaale ahaan, inaad tirtirto feyl waxay ahaan laheyd:
Haddii aan rabo inaan masaxo fayl ay ku jiraan dhammaan waxyaabaha ku jira:
Tan waan cadeeyay, waxay qaadan doontaa waqti dheer, laakiin aad uga dheer sidii caadiga ahayd. Xusuusnow in la qoray oo la tirtiray dhowr jeer, sida iska cad tani waxay qaadan doontaa waqti aad uga badan inta caadiga ah. Laakiin dabcan ... haddii wax ay doonayaan wax waxay ku kacaysaa isaga, haddii aan dooneyno inaan ka takhalusno macluumaadka sida ugu macquulsan uguna macquulsan, waqti ayey nagu qaadan doontaa 😉
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inay qaadato waqti ka yar, waad isticmaali kartaa halbeegga -l Waxa ay tani samaynayso ayaa ah in la qori doono oo la tirtiri doono laba jeer oo keliya, waxay ka dhigi doontaa habka tirtirista mid dhakhso badan laakiin ma noqon doonto mid ammaan u ah sidii uu ahaan jiray.
Sikastaba, uma maleynayo inay jiraan waxbadan oo lagu daro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Tirtir macluumaadka si nabdoon adiga oo tirtiraya
Hard disk adag oo gacmahaaga ku dhaca .. Miyaad u malaynaysaa in tirtiridda-qorista marar badan isla qaybtaas ay wanaagsan tahay? Hooyaday aniga .. xDD
Laakiin xaaladaha degdegga ah ...
Hadda waan fahmay sababta in badan oo adag oo adag ay qarxeen, hahaha. Mid ka mid ah waxyaabaha sidan oo kale ah wuxuu ku samayn doonaa masaakiinta. o_O
Waxaan ku siinayaa ikhtiyaarrada, isticmaalaha ayaa xor u ah inuu doorto inuu adeegsanayo iyo in kale 😉
Haddii aadan rabin in faylka la soo celiyo, waa u qalantaa
Ma ogtahay inta jeer ee aad wax ku qortay isla qaybahaaga diskigaaga? Mise waxaad u maleyneysaa in diskkaagu uusan xad lahayn oo uusan waligiis qori doonin qaybaha?
Xiisaha barnaamijka, ma ogeyn. Illaa iyo hadda waxaan isticmaalay Bleachbit ama isla Shred-ka kaas oo kuu oggolaanaya inaad doorato tirada jeer ee aad dib ugu qori karto feyl, hadda waxaan haysannaa hal ikhtiyaar oo dheeraad ah oo ah marka ay CIA soo wacdo albaabka xDD
Dariiqa kaliya ee si badbaado leh loogu masaxi karo (Waana taas hada) waa burburin jireed.
Burburinta jireed ayaa cad inay tahay habka ugu aaminka badan, hada isticmaalida qaababka ay ku taliyeen khubarada ama DoD waa wax aan macquul aheyn in aan macquul aheyn in laga soo kabto macluumaadka la xiriira, waxaan rajeyneynaa jajabyada go'doonsan ilaa iyo in lagu daro nooc kale oo tijaabo ah ama xogta kaligeed ma qiimo ma laha.
* aan macquul aheyn macquul maaha hahahaha: facepalm:
Ma haysto lacag igu filan oo aan ku iibsado dirawal adag mar kasta oo aan doonayo inaan qariyo xumaantayda 0.o
Nin, taas waxaa u ah teknoolojiyad sir ah, halkaan waxaa ku yaal maqaallo wanaagsan oo ku saabsan mowduuca.
Waxaad dib ugu qori kartaa dhammaan wadista adag xogta baaxada leh
Kheyraad wanaagsan, laga yaabee in magaca Boosta uu ahaado "Tirtir faylasha si joogto ah"
Sababtoo ah "ammaan" waa qaraabo, darawal adag oo liita. XD.
Waxaan u maleynayaa inaan loo baahneyn, sanado ka hor waxaa jiray amar la yiraahdo shred.
$ shred -u gudub.txt
Haddii aad uga sii daran tahay:
$ jeex -n 200 -z -u pass.txt
Ma akhriday $ nin shiiday?
Waxay si cad u sheegaysaa in nidaamyada faylalka casriga ah ay dib ugu qori karto cinwaan jireed oo ka duwan feylka la tirtirayo, iyo kuwo kale oo ay ku qeexan tahay ext3, sidaa darteed waxaan u maleynayaa in ext4 sababo la mid ah awgood aysan dammaanad qaadi doonin hawlgalka sidoo kale.
Haddii aad isticmaasho qalab noocan oo kale ah sababta oo ah waxaad dooneysaa inaad hubiso in cinwaanada jireed ee saxda ah la tirtiray oo dib loo qoray, sidaa darteed waa wax aan faa'iido lahayn maalmahan, illaa aad isticmaasho nidaamyo faylal duug ah sida fat32, ext2, iwm.
Helitaanka isticmaale laba-tallaabo ah ee Ubuntu iyadoo la adeegsanayo Google Authenticator
La heli karo si loo soo dejiyo Firefox 20